Umnyaka we-3000 Old Mummy Tattoo - Tattoos Art Ideas
Umnyaka we-3000 Unyaka Omama We-Tattoo
i-sonitattoo July 5, 2016
Umama we-3,000 oneminyaka eminyaka ubudala omama wesifazane wayegqoke izidakamizwa ezifihlekile. Umama, otholakala edolobhaneni okuthiwa iDeir el-Medina, eGibhithe, wayengowesifazane owayeziqhenya ngokuziqhenya amehlo akhe entanyeni, emahlombe nasemhlane, ehlathini, amaqanda ekhanda lakhe.
Umama watholakala edolobheni iDeir el-Medina. Qaphela ukuthi amanye ama-tattoos abonakala emehlweni, kodwa amanye ayingxenyana yomzimba eye yahlushwa yizinhlayizi ezisetshenziselwa ukumiswa.
Esebenzisa isithombe se-infrared, isazi semvelo uGhada Darwish Al-Khafif wakwazi ukubona le tattoo yezinkabi ezimbili, ezimele unkulunkulukazi uHathor. Wabuye wasebenzisa ukuhlelwa kwedijithali ukukhokhela ukusulwa kwesithombe esibangelwa ukukhishwa kwesikhumba somama.
Isazi sesayensi yezinto eziphilayo uGhada Darwish Al-Khafif isebenzisa izithombe ezifakwe ngaphansi kwe-infrared ukuze zibonwe izidakamizwa esikhumbeni esonakele.
Funda indaba egcwele lapha
imisindo yezintamboama-tattoo kubantuimibhangqwana emibhangqwanatattoos udadei-compass tattootattoos zomqheleabangani bomngane abangcono kakhuluama-Tattoos amantombazaneamathumbu esifubaukudubula izithombeukubuyisa izithombeizithombe zezinhlangaizithombe zezinyangaumdwebo we-watercolorama-tattoos engalouthando izithombeimidwebo yamasleetattoo isoI-Heart Tattoosama-sun tattoosTattoos zeJomethrikhilotus flower tattooama-tattoo amahangeangel tattoosbird tattoosrose tattoosumdwebo womcibisholoamathrekhi we-butterflyumdwebo wezindlovuTattoos yama-Ankletattoos eagleama-tattooi-henna tattooumculo womdweboi-cherry ehlobisa i-tattooi-octopus tattootattoos cuteizinyawo zamathamboizibonakaliso zezinkanyezi zezinkanyezingesandla izidakamizwaidayimani tattooflower tattooskoi fish tattoodesign mehndii-scorpion tattooama-cat tattoostattoo engapheliI-Feather Tattooimibono ye-tattooizithombe zezingonyama